Saturday September 17, 2016 - 10:15:39 in Wararka by Super Admin
Afhayeenka isbahaysiga Mareykanku hoggaaminayo ee ku duulay wadamda Ciraaq iyo Suuriya ayaa sheegay in meel ku dhow magalada Al-raqqa ay ku dileen Dr, Waa’el Alfaayad oo marmarka qaar adeegsan jiray magaca Waa’el Caadil Xassan sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Mareykanka.
Duqeynta oo dhacday horraantii bishan September ayaa lagu beegsadan gaari uu la socday madaxa warfaafinta Xoogaga IS oo u dhigma wasiirka warfaafinta.
Isbaheysiga duqeymaha ka wada Ciraaq iyo Suuriya ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in Dr Wa’el uu maamuli jiray Filimada gowraca iyo goodinta ah ee xoogaga IS soo saaraan.
Bishii lasoo dhaafay ayay dowladaha Ruushka iyo Mareykanka si isku mid ah u sheegteen in duqeyn ka dhacday Suuriya ay ku dileen Sheekh Abuu Muxamed Alcadnaani oo ahaa Afhayeenkii xoogaga IS.
Illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin saraakiisha Jamaacada dowladda oo ku aaddan sheegashada mareykanka, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan ayay Mareykanku ku dileen hoggaamiyaal katirsan jamaacaadka Jihaadka caalamka.
Meelaha Mareykanku duqeymaha ka geystaan waxaa kamid ah wadamada Soomaaliya,Yemen iyo Afghanistan, Jamaacaadka Jihaadiga ah ayaa Mareykanka ku eedeeya in uu ka meermeerayo dagaal fool ka fool ah taasi bedelkeeda uu adeegsanaya Jawaasiis iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan.